DFKMG oo xukuntey ajaanibtii garoonka Muqdisho lagu qabtey (Dhageyso + Sawiro) – SBC
DFKMG oo xukuntey ajaanibtii garoonka Muqdisho lagu qabtey (Dhageyso + Sawiro)
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho maxkamad lagu soo taagey ajaanbin dhawaan iyagoo lacag ku sida diyaarado lagu qabtey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo u dhashay wadamada Mareykanka, Ingiriiska & Kenya.
Maxkamada gobolka Banaadir oo la soo taagey ajaanibtaasi ayaa shaac ka qaaday in labada nin ee u kala dhashay wadamada Mareykanka & Ingiriiska oo lagu kala magacaabo Andrew Roberts & batridge brigham kiiba lagu xukumay mid 15 sano oo xarig ah iyadoo lacatii ay wateen ee lagu qabtey ee dhameyd 3,600,000,000 (Sadex milyan & Lix boqol kun oo doolar) ay si buuxda ula wareegtay dawlada KMG Soomaaliya.(Player-ka hoose riix si aad u maqasho go’aanka maxkamada) Go\_’aan maxkamad xukun ajaanib
Guddoomiyaha maxkamadda Gobalka banaadir Xaashi Cilmi Nuur ayaa sheegey in sidoo kale labada nin ee u dhashay wadamada Mareykanka & Ingiriiska lagu xukumay min 15,000 (Shan & Toban kun oo doolar)
Qareenada raggan difaacayey oo aafar qof ka koobnaa ayaa maxkamada horteeda ka sheegay in nimankan ay lacagta u wadeen kooxo burcad badeed Soomaali ah oo ay doonayeen inay ka soo dayaan dadka ay haystaan & markabka ay la socdeen.
Maxkamada ayaa sidoo kale waxay ku xukuntey Duuliyeyaashii diyaaradaha (Pilot) & caawiyeyashoodii oo u dhashay wadanka Kenya, kuwaasi oo lagu xukumay kiiba 10 sano oo xariga ah iyo waliba 10,000 (Toban kun) oo ganaax lacageed ah.
Gudoomiyaha maxkamada ayaa sheegtey in nimankaasi loo cuskaday qodobada 71, 184,375, 376, 383, 384, 297,298, xeerka qibaata Soomaaliyeed & xeerka dhaqaalaha qaranka, qodobkiisa, qodobka 3-aad, farqadiisa 1-aad, 2- aad, & qodobaka afaraad isla xeerkaasi ee soo baxay sanadkii 1975-tii leejo 54 sharci lambar.
Gudoomiye Xaashi wuxuu cadeeyey in labadii diyaaradood ee lacagta lagu waday & waliba qalabkii ay wateen sidoo kale lala wareegay dhamaan.
Ajaanibtan lagu qabtey magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa la socdey laba diyaaradood 24-kii bishii May, iyadoo lacagtii ay wateen la dhigay Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Warar SBC ay ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lacagta raggan ay wadeen loo wadey maraakiib laga kala leeyahay wadamada Shiinaha & Masar kuwaasi oo lagu kala magacaabo MV Suez & MV Yuan Xiang, ragga lacagaha wadey ahaayeen dulaalin u dhaxeeyey burcad badeeda & shirkadaha maraakiibtaasi iska leh.
wax fiican ay qabatay dowadu